Tirada na soo booqday.	Maanta25392shalay26711Isbuucaan109106Isbuucii hore260142Bishaan772714Bishii hore1319148Maalmaha oo dhan5910032Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 176 guests, 4 members Your IP: 50.16.132.180 , Today: Jun 18, 2013	Xabsiyada Maamulka Somaliland Oo Lagu Tacdiibiyo Maxaabiista (Dhageyso).
Written by Maamul on 29 January 2013. Maamulka isku magacaabay Somaliland ayaa dhibaata xoogan ku haya dadka ahludiinka ah eek u dhaqan gobolada Qarax ka dhacay gudaha Madaxtooyada Villa Somalia.
Written by gobal on 29 January 2013. Warar nagasoo gaaray Muqdisho ayaa sheegaya qarax weyn inuu ka dhacay gudaha Madaxtooyada Villa Soomaaliya Xasan Sheekh Oo Wadamada Afrika Ka Dalbay in ay Dhibaato Hor Leh Geliyaan Shacabka Soomaaliya.
Written by Maamul on 29 January 2013. Hoggaamiyaha Dowlada Federaalka ayaa muujiyay sida xukuumaddiisa dabadhilifka ah aysan uga maarmin maciinsiga Ciidanka Faransiiska Oo Tambookta Qabsaday iyo Mujaahidiinta Maali Oo Ku Dhawaaqay “In Maali ay isku bedeli doonto Qabuuraha ciidanka cadawga”.
Written by Maamul on 29 January 2013. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in ay guulo ka gaartay duulaanka saliibiga ah oo ay ku qaaday wadanka Dhagayso: Dr. Akram Xijaazi Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababta Loogu Duulo Wadamada Lagu Maamulo Shareecada Islaamka.
Written by Maamul on 28 January 2013. Culimada, Ducaadda Mujaahidiinta iyo Golaha Baraarugga Islaamka, wax badan ayey idin kaga sheekeeyeen HIV-ga Oo Halis Ku Haya Dhalinyarada Jabuuti iyo Digniino Hor leh oo la bixiyay.
Written by Maamul on 28 January 2013. Cudurka HIV Aidis-ka ayaa si daran ugu faafay wadanka Jabuuti oo kamid ah wadamada ugu fisqiga badan Netenyahu “Faransiiska Waan Ku Garab Taaganahay Duulaanka uu Ku Qaaday Maali..waxaan leenahay Burburi Islaamka”!!.
Written by Maamul on 28 January 2013. Xukuumadda Yahuudda ee xoogga ku heysata dhulalka muslimiinta Filasdiin ayaa ku dhawaaqday in ay qeyb Bandaw Ka Dhaqan Galay Wadanka Masar iyo Kooxaha Calmaaniyiinta Oo Wadahadal Diiday.
Written by Maamul on 28 January 2013. Waxaa Caawa si rasmi ah u dhaqan galay bandaw ay dowladad Masar kusoo rogtay gobollo katirsan wadankaasi Faah Faahin Kasoo Baxday Dagaallo Xalay Muqdisho ka dhacay.
Written by Maamul on 28 January 2013. Dagaal Culus ayaa Ciidamada Mujaahidiinta waxay ku qaadeen dhowr saldhig oo Ciidamada Shisheeye ay Howl-wadeenada Caafimaadka Isbitaalka Magaalada Ceelbuur Oo Dowro Diini ah loo Qabtay (Dhageyso).
Written by Maamul on 28 January 2013. Wilaayada Islaamiga Galguduud ayaa dowro diini ah u qabatay shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala intabadan Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo si kulul uga jawaabay hadalkii madaxdooda dalka Britain.
Written by gobal on 28 January 2013. Maamulka isku magacaabay Somaliland ee sida aadka ah ugu dhaw sirdoonka dalka Ingiriiska ayaa aad uga Xildhibaan Ciirro "Shacabka Muqdisho Waa in ay Sameeyaan Kacdoon" Dhageyso.
Written by Maamul on 28 January 2013. Iyadoo dhibaatooyin dhan walba ah ay ka jiraan magaalada Muqdisho ayay xildhibaanada DF-ka qaarkood Dowladda Britain Oo Muwaadiniinteeda Uga Digtay in ay U Safraan Deegaanada Somaliland.
Written by Maamul on 28 January 2013. Dowladad Ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda uga digtay in ay u socdaalaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Wilaayada Shabeelaha Hoose Oo Deeq Lacageed Gaarsiisay Dadkii Ku Waxyeeloobay Howlgalkii Faransiiska ee Buula Mareer (Dhageyso).
Written by Maamul on 28 January 2013. Wilaayada islaamiga shabeelaha Hoose ayaa deeq lacageed gaarsiisay dadkii Eheladoodu ku shahiideen howlgalkii Dhagayso: DF-ta Oo Ku Faantay in ay Xariir Laleedahay Hay'adaha Ashahaadda ladirirka Adduunka.
Written by Maamul on 28 January 2013. Dowladad Federaalka ayaa ku faantay in ay xariir wanaagsan laleedahay hay’adaha Ashahaadda ladirirka ca
Written by Maamul on 27 January 2013. Sicir bararka ayaa weli fara ba’an ku haya shacabka magaalada Muqdisho kuwooda danyarta ah xilli magaalada ay
Maleeshiyaad Katirsan DF-ka Oo Isbaaro u dhigtay Gaari Rakaab ah,Dhimasho iyo Dhaawac ka Dhashay.
Written by Maamul on 27 January 2013. Ammaanka wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Baydhabo ayaa faraha kasii baxaya kadib markii ay Rabshado Dhiig Badan Ku Daatay Oo Masar Ka Dhacay iyo Taageerayaashii Mubaarak Oo Ikhwaanka Jallaafaynaya (Warbixin).
Written by Maamul on 27 January 2013. Khalalaasa dhiig badan ku daatay ayaa dib ugasoo cusboonaaday wadanka Masar oo kamid ah wadamada carabta Ciidamada Mujaahidiinta Oo Hogaamiye Burcad ah ku dilay Gobolka Hiiraan.
Written by Maamul on 27 January 2013. Ciidamada mujaahidiinta wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa galabta howlgal gaar ah ka fuliyay deegaan Faysal Waraabe " Kama Qeyb gelayno Shirka London Lagu Qaban Doono oo ah Mu'aamarada ka dhan ah Somaliland" Dhagayso.
Written by Maamul on 27 January 2013. Maamulka isku magacaabay Somaliland ayaa shaaciyay in aysan aqbali Karin aqoonsiga ay dowladda Mareykanka Dhagayso:Howlgallo Raaf ah Oo Markale ka dhacay degmada Hodon Ee Magaalada Muqdisho.
Written by Maamul on 27 January 2013. Maleeshiyaadka DF-ka oo kaashanaya ciidamada shisheeye ayaa weli magaalada Muqdisho kasii wada howlgalada r
Sheekh Yuusuf Cali Ugaas Oo Ka Warbixiyay Xaaladda Wilaayada Hiiraan (Dhagayso).
Written by Maamul on 27 January 2013. Wilyaada Islaamiga Hiiraan ayaa faah faahin ka bixisay xaaladda ay ku sugantahay wilaayadaasi dhacda Cadawga Faransiiska Oo Qabsaday Gaawa iyo Xasuuq Xun Oo Muslimiinta Maali lagula Kacay.
Written by Maamul on 27 January 2013. Ciidamada cadawga isbahaysanaya ee ku duulay wadanka Maali ayaa bilaabay in ay gubaan magaalooyinka Kulan Fashil Kusoo Idlaaday Oo Degmada Xudur Ku Dhaxmaray Saraakiisha Ciidanka Itoobiya iyo Ganacsatada (Dhageyso Wareysi).
Written by Maamul on 26 January 2013. Waxaa fashil kusoo idlaaday kulan si qasab ah ay ganacsatada degmada Xudur uqabteen saraakiisha ciidamada Start«51525354555657585960»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan